नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा, १६ अर्ब ९५ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
जेठ २५, काठमाडौं । मंगलवार नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५३ दशमलव ४४ अंक अर्थात् १ दशमलव ८४ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ हजार ९६० दशमलव १४ विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेले यसभन्दा अगाडिको २ हजार ९०६ विन्दुको रेकर्डलाई ब्रेक गरेको हो । मंगलवार २१८ ओटा कम्पनीको ३ करोड ५७ लाख ३७४ कित्ता शेयरको १ लाख ४९ हजार ७०८ पटकको कारोबारमा रू. १६ अर्ब ९५ करोड १२ लाख ९९ हजार ४० बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका २१८ ओटा कम्पनीमध्ये ३६ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य सर्किट लेबलमा वृद्धि भएको छ । ३६ ओटा कम्पनीमध्ये ७ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
गोर्खाज फाइनान्स, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहका परिसूचकमध्ये सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र वित्त समूहको ८ दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी, बैंकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, व्यापार समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको १ दशमलव ९९ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ७८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको २ दशमलव २१ प्रतिशत, अन्य समूहको परिसूचक २ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ६५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक २ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै, होटल एण्ड टुरिजमको परिसूचक शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ ।
मंगलवार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रू. १ अर्ब ६ करोड ६४ लाख ६४ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयर अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य रू. १ हजार ९७७ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, मेरो माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा २ दशमलव ८५ प्रतिशतले कमी आएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ७३८ मा झरेको हो ।
पछिल्लो सयम लगानीकर्ताहरुले सेक्टरवाइज लगानी गरेको देखिन्छ । हाइड्रोपावर समूहबाट विकास बैंक र वित्त समूहमा लगानीकर्ता सिफ्ट भएको पाइन्छ । अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले एक समूहबाट प्रोफिट बुक गर्दै सेक्टर परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।
नेप्से बढ्नुमा सेक्टरवाइज वृद्धिको सपोर्ट मिलेको जानकार बताउँछन् । बजार अहिले बुलि ट्रेण्डमा रहेको छ । लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको आधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्ष राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन पहिलो घण्टामा १२.३३ अंकले घट्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)[२०७८ असार, ३]